Warshad Soosaara Marble Polishing Crystallizer, Shirkado Shirkado Soosaarayaal ah
Mashiinka Dabaqa (2)
Nadiifiye Vacuum (3)
Nadiifiye rooga (4)
Air Blower (5)
Dayactirka Dhagaxa Nadiifinta
Marmariid Nadiifinta Nadiifinta
SC-1500 Gubi-xawaare sare
Mashiinka Cusbooneysiinta Dabaqa SC-004
Mashiinka Cusbooneysiinta BD2AE-Floor
Mashiinka Cusbooneysiinta Dabaqa BD1AE
BD3A Waxqabadka Multi-Brushin ...
MR2 Marmar Polish Crystallizer
MR2 waa badeecad dayactir marmar caan ku ah dib-u-kicinta iyo dayactirka maalinlaha ah ee dhulka dushiisa. Waxay si dhakhso leh u hagaajin karaan duugga dusha sare waxayna kordhin karaan dhalaalka dusha sare.
MR3 Marmar Polish Crystallizer
MR3 waa a waa shey daryeel marmar ah oo la xoojiyey oo loo isticmaalo in la nadiifiyo oo la nadiifiyo dusha marmar. Waxay si dhakhso leh u soo celin kartaa dhalaalka dusha marmarka, hagaajinta cufnaanta dusha sare iyo xirashada caabbinta. U isticmaal MR3 si joogto ah si aad u ilaaliso dabaqa marmarka wuxuu ka caawinayaa in si wax ku ool ah loo hagaajiyo xoqida dusha marmar duugoobay, soo celinta dhalaalka dusha sare iyo hagaajinta cad.
MR5 Marmar Polish Crystallizer
MR5 waa badeecad daryeel sagxad marmar la kobciyey oo dib loogu dhisayo ama lagu nadiifinayo dusha marmar. Waxay si dhakhso leh u dayactiri kartaa xoqitaanka laga sameeyay dusha marmarka iyadoo la adeegsanayo, dib loo soo celinayo ama la hagaajinayo dhalaalka dusha sare.
HAL TALAABAD Crystallizer buufin N 'BUFF -2501
2501 waa nooca loo yaqaan 'crystallizer' oo ka sameysan NCL, waxaa loo soo saaray sida ugu fudud ee loo isticmaali karo nidaamka dib u soo celinta ee marmarka, terrazzo iyo sifaynta sagxadaha nuuradda. Crystallizer Spray N 'BUFF wuxuu soo saaraa boolis aad u sareeya. Dusha sare ee dib loo soo celiyay ayaa iska caabin doona xoqidda iyo xoqida. Dusha sare ee dib loo soo celiyay wuxuu noqon doonaa mid aad u adag. Crystallizer Spray N 'BUFF ayaa ku qallajisa sidaad u xoqdo sidaas darteedna uma baahna nadiifin qasan.
Crystallizer loogu talagalay marmarka iyo dabaqyada terrazzo –AGUILA CR-2
CR-2 - Sealer-crystallizer for marble iyo terrazzo floor waxay bixisaa heer sare oo dhalaalaya oo u adkaysta, ilaalinta dabaqa oo xiran oo la ilaaliyo muddo dheer.
Kareemis loogu talagalay marmarka iyo dabaqyada terrazzo –AGUILA CR-2T
CR-2T - Sealer-crystallizer oo loogu talagalay marmar iyo terrazzo sagxadaha waxay siisaa heer sare oo waara oo adkeysi leh, iyadoo sagxadda lagu haayo oo la ilaaliyo muddo dheer.
Marmar Nadiifinta Nadiifinta-KLEEVER K2 / K3
Shayga KLEEVER K2 KLEEVER K3 Muuqaalka dareeraha casaanka Awood dareeraha casaanka 5L 5L xirxirida 3CANS / CTN 3CANS / CTN Codsiga: Marmar Marmar
Right Xuquuqda daabacaadda - 2010-2020: Dhammaan Xuquuqda Ayaa Leedahay.